संसद विघटनपछि बिशेष टोली नेपाल पठाएको चीनले पहिलोपटक किन दियो यस्तो प्रतिक्रिया ? — Imandarmedia.com
संसद विघटनपछि बिशेष टोली नेपाल पठाएको चीनले पहिलोपटक किन दियो यस्तो प्रतिक्रिया ?
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गरेसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा समेत विभाजन आइसकेको छ । संसद विघटनपछि बढेको राजनीतिक सरगर्मीका बीच नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले स्पष्ट २ धारमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जान सुझाव दिएका छन् ।
खनाललाई भेटे पछि चिनियाँ टोलीले सभामुख अग्नी सापकोटासँग पनि भेटवार्ता गरेको छ । चिनियाँ टोलीले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त टोलीले आइतबार काठमाडौंमा आउने वित्तिकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटिको थियो ।